Ahoana ny fanatsarana ny lisitry ny vokatra amin'ny Amazon amin'ny teny fanalahidy lava be?
Ndeha isika hiatrika izany - amin'ny alàlan'ny algorithma amin'ny alàlan'ny fikarohana A9, ny ambaran'ny lava-pitondran'i Amazon, dia manana hery goavana be ankehitriny, indrindra raha ampitahaina amin'ny Google AdWords. Midika izany fa misy ny volavolam-pandaminana iray lehibe kokoa amin'ny fandresena mbola tsy tapaka ary ny teny fikarohana voafaritra izay mety ho hita ao amin'ny Amazon avy amin'ny mpivarotra rehetra izay vonona sy vonona ny handany andro vitsivitsy amin'ny fikarohana azy ireo mba hahazoana tombony matanjaka amin'ny fifaninanana. Izany no mahatonga ny fisaintsainana tsenam-barotra ambany kokoa eo amin'ny Amazon amin'ny teny lavabe amin'ny teny malaza sy ireo andian-teny mifandraika amin'izany, dia mety ho tonga lafatra ara-drariny ho anao.
Tsy misy fisalasalana fa ny teny malaza amazonin'ny teny malaza sy ny teny fikarohana dia mety hahasoa ny mpivarotra rehetra, indrindra satria izy ireo no zavatra voalohany manome ny fototra ho an'ireo fangatahana fikarohana rehetra ary matetika ampiasain'ireo mpividy entana any. Ny tena zava-dehibe - midika izany fa ny teny malaza amin'ny teny malaza amazonin'i Amazonia dia afaka manazava ny habetsaky ny sarany tena sarobidy nefa mbola sarobidy mora foana ho ampiasaina amin'ny tombontsoanao manokana.
Ny zava-misy dia, ankoatra ny foto-kevitra ankapobeny momba ny raharaham-barotry ny ecommerce amin'ny ankapobeny, ary ny Amazona mihitsy, matetika ny teny filamatra lava lava dia matetika natao hananana fikarohana ambany kokoa fifamoivoizana. Noho izany, ny ankamaroantsika dia mety hihevitra fa kely ny vokatra azo avy amin'ny varotra, indrindra raha ampitahaina amin'ireo teny malaza amin'ny ankapobeny malaza. Mariho anefa, fa raha ny fametrahana ny fifantohan-kevitra mifantoka indrindra amin'ny teny malaza amazonin'ny teny tailandey, ny fifamoivoizanao mpanjifa dia mety ho andrasana ho tanjona tsara kokoa. Fa satria ianao dia mety ho hita kokoa lavitra ny lalan'ny fiovam-po. Ary midika izany fa ny ankamaroan'ny fiovam-po dia tena ankafizinao indrindra, indrindra amin'ny vokatry ny lionan'ny mpanjifa izay mety hahitana ny tena fividianana amin'ny fampiasana teny manan-danja manokana. Tsy hoe iray monja.
Fa eto isika izao no tonga amin'ny teboka farany - ny fanamby lehibe amin'ny Amazon sy ny lavabe teny lavabe dia ny hoe sarotra kokoa ny mahita azy ireo, fa tsy ireo teny fototra tsotra sy fikarohana..Midika izany fa amin'ny teny famaritana ny teny fanalahidy fohy dia tsy misy afa-tsy famelabelarana tsotra sy marevaka azo alaina maimaim-poana, raha tsy mila fikarohana fototra lehibe ilaina. Amin'ny lafiny iray anefa, ny fehezan-teny lava fohy amin'ny endritsoka dia matetika nofaritana mazava tsara sy tsy misy dikany - izay sarotra aseho amin'ny mpivarotra, anisan'izany ireo mivarotra amazonaly. Ary ity misy fomba roa lehibe hanamboarana ny lisitra voalohany sy ny fanatsarana ny varotrao amin'ny Amazon amin'ny teny lavalava lava. Ireto izy ireo.
Ho an'ny safidy voalohany anao, manoro hevitra aho ny hananganana fanentanana PPC tsy tapaka. Raha manao izany ianao, dia afaka mamily ny làlanao amin'ny alalan'ny tatitra Search Term izay mandrakitra ny teny fikarohana ianao - ary vita ianao. Mariho anefa fa matetika no tsy ampy io fomba fiasa io, indrindra satria matetika izy no manome lisitry ny teny fanalahidy lava loatra, izay sarotra ho an'ny olona iray, farafaharatsiny irery.
Ny safidy faharoa hamoronana lisitra ankapobeny izay mandrakitra ireo teny manan-danja rehetra momba an'i Amazona amin'ny teny tailandey dia manao izany amin'ny alàlan'ny fitaovana fikarohana ho an'ny fikarohana fototra manokana. Raha ny amiko kosa, manoro hevitra aho amin'ny fampiasana Sonar miaraka amin'ny antontan-kevitra lehibe mba hanangonana ny teny rehetra amin'ny teny lava be sy ny fikarohana amin'ny vokatra tsirairay atolotra anao. Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Ary midika izany fa amin'ny fampiasana an'io fitaovana manokana io no ahafahanao mamorona ny lisitr'ireo lohateny lehibe farany amin'ny teny tailandey ho an'ny Amazon - haingana sy mora Source .